wareejiyo calender iCloud in Android
iCloud u Android
1 iCloud in Android
2 nidaameed iCloud Xiriirada la Google
3 iCloud Calendar in Android
4 iCloud Music inay Android
5 iCloud Photos in Android
6 iCloud Alternative on Android
7 Transfer iCloud in Android
8 Set Up iCloud on Android
4 Siyaabaha Bedelka iCloud Calendar in Android
Habka 1: Transfer jadwalka iCloud in Android la MobileTrans
Wondershare MobileTrans waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan codsi u ogolaanaya user si ay u gudbiyaan xogta ay ka iCloud qalabka Android iyadoo wax dhibaato ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad wareejiyo dhammaan xogta aad ka mid yihiin barnaamijyadooda, music, photos, music, xiriirada iwm qalab android adiga oo aan aad u baahan inay ku dhacaan wax badan oo ka mid ah faahfaahinta farsamada galay ma waxa aad u baahan tahay in ay horay u yeelan lahaa gaadhista ee geedi socod kasta oo la mid ah.
Illaa iyo hadda, waxaan ku jirnaa kaliya ee ay wax la wareejinta jadwalka iCloud in Android qalab oo aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa download MobileTrans iyo raac tallaabooyinkan fudud:
1. Ka dib markii ay ku rakibidda MobileTrans in aad laptop / computer, gasho iCloud ka log ee qaybta in MobileTrans ee guriga shaashadda. Connect qalab Android aad si aad laptop / computer.
2. Dooro iCloud gurmad la doonayo ka mid ah liiska gacanta bidix si ay u soo bixi files gurmad. Sug download si ay u buuxiyaan.
3. Laga bilaabo menu ku tilmaamay "Dooro Content soo celinta", dooro "Calendar".
4. Tirsiga taariikhda iCloud files toos ah u bilaabi doonaa in la soo guuriyeen in qalabka xiran Android.
Aad dareentay doonaa by hadda in MobileTrans waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo qoreysa interface ah oo quruxsan. Haddii aad doonayso inaad si kastaba ha ahaatee, in la isticmaalo codsi loogu talogalay gaar ahaan kala iibsiga jadwalka iCloud, waxaa jira fursado badan oo laga heli karaa Google Play Store qaar ka mid ah kuwaas oo lacag la'aan ah, dadka kale ku kici wax yar. Saddex ka mid ah codsiyada sida dib ayaa loo eegay ee khadadka soo socda:
Habka 2: Transfer jadwalka kaliya iCloud in Android la Chine
1. SmoothSync Waayo, daruurtii Kalandarada
SmoothSync waa app fudud oo loogu talagalay in dadka isticmaala ha ku jadwalka ay iCloud in ay Androids wareejiyo iyo qeybsanaan. Waxa si fudud waxaa laga heli karaa Play Google Store oo lagala soo bixi karaa $2.99.
All inaad samayso waa kala soo bixi, waxa uu qalab Android aad, login adiga oo isticmaaleya isticmaale tufaax ansax Id, dooro kalandarka in aad rabto in aad u hagaagsan oo ha app samayn inta kale ee aad u.
Calan fursadaha u hagaagsan aad ka jeeclaadeen by sahaminta iyada oo bedeley ah. Waxaad dooran kartaa bareeg u hagaagsan tarin, ogolaan app ay ku maamulaan ee asalka si ay u qabtaan hawlo oo dhan oo aan ku dhibayaan.
Faa'iido: aad Halkaan hoose u hagaagsan taariikheed ee labada hab, doorasho u hagaagsan si toos ah, fududahay in la isticmaalo.
Qasaarooyinka: ma aan oggolaan inaad ka qalab Android aad xaalkaa jadwalka iCloud.
2. nidaameed u iCloud
Nidaameed u iCloud waa app wax soo saarka kale laga heli karaa dukaanka app for free. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan aad jadwalka iCloud in qalab Android, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa toos ah ka qalab Android aad aad u saxaa. Waxaad kaliya si ay u soo bixi in qalab aad iyo gasho isticmaalaya ID Apple oo sax ah aad, dooro kalendarka si aad u hagaagsan oo mar kala iibsiga dhamaato, waxaad ka arki kartaa oo ka bedel midig ka qalab Android aad.
Faa'iido: ogolaanaysaa inaad ka qalab Android aad xaalkaa jadwalka iCloud.
Qasaarooyinka: hagaajinta u baahan tahay oo ku saabsan dhibaatada la xanibay keyboard, awood la'aanta in ay ka shaqeeyaan qaar ka mid ah telefoonnada gacanta LG, awood u lahayn inuu hagaagsan sabab la'aan mararka qaarkood
Samsung Smart Switch Mobile ma aha oo kaliya adeegsanayo in u wareejinta jadwalka iCloud in qalab Android, laakiin waxa ay sidoo kale taageertaa kala iibsiga ee xiriirada, music, sawiro, fariimaha qoraalka ah xitaa barnaamijyadooda telefoonka iyo waa ay awoodaan in ay soo jeedin lahaayeen barnaamijyadooda la mid ah haddii kuwii hore ma laga heli karaa qalabka Android.
Ka dib markii ay ku rakibidda app ay u qalab Android aad, waxaad dooran kartaa nooca suuqa kala iibsiga aad rabto in aad fuliso, ka fiiri macluumaadka aad doonayso in aad wareejiso oo guji "Import".
Faa'iido: Taageerada iPhone in Galaxy, Lugood in Galaxy iyo iCloud in Transfer Galaxy
Qasaarooyinka: siisaa baadi halka wareejinta Guda call iyo fariimaha, taageeraa oo kaliya qalabka taxane Samsung Galaxy
Waa kuwee ka mid ah yaa idiin khayr badan?
Cloud Kalandarada Nidaameed u iCloud Samsung Smart
Heerka dhibaatooyin Easy Easy Dhexdhexaad
Noocyada File taageerayaan iCloud Calendar iCloud Calendar iCloud Calendar, music, sawiro, xiriirada,
fariimaha qoraalka ah, abuse wac, Chine
Qalabka ay taageerayaan Android Devices Android Devices Samsung Galaxy Devices
In this article, waxaan sahmin siyaabo dhowr ah si ay u gudbiyaan jadwalka iCloud in Android; mid ka mid ah iyadoo la isticmaalayo software codsiga desktop ah iyo saddex kale oo ah qaab barnaamijyada moobiilllada. Kuwan oo dhan waxay leeyihiin xoog badanyihiin iyo meelaha ay lakiin oo dhan awood u leeyihiin in ay shaqo ku heli sameeyo. Mid ka mid dooro laga yaabaa in mid ka mid ah sida uu baahan yahay.
3 Siyaabaha kala iibsiga xogta ka soo Old iPad in iPad hawada 2 ama iPad mini 3
Sida loo AVI ka saar Audio
> Resource > Transfer > 4 Siyaabaha wareejiyo calender iCloud in Android